သောသီခို: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဦးဆောင်မှုအား ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံများမှ ဝေဘန် သုံးသပ်ခြင်း ။ အပိုင်း (၂)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဦးဆောင်မှုအား ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံများမှ ဝေဘန် သုံးသပ်ခြင်း ။ အပိုင်း (၂)
လွန်ခဲ့တဲ့ကာလတလျှောက်လုံး ကရင်ပြည်နယ်တွင်းမှာ စစ်ပူချိန်မြင့်နေချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စုလူသိရှင်ကြား Officially ဘာတခုမှထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုတာမရှိခဲ့ပါ။ ယခုကချင်ကိစ္စလည်း သူမငြိမ်နေတယ်။ ယခု ရှေ့ နေဦးအောင်ထူးရဲ့ ဥပဒေရှုထောင့်မှ ထောက်ပြဝေဖန်သုံးသပ်မှုကို တင်ဆက်ပေးလိုက်တယ်။
Analyze on DASSK by Aung Htoo – part 2
Posted by PKD at 11:10 AM
Daw Suu is now so pleased with the way she has been treated by thein sein gov. She is having an excellent chance of mobilizing her party as long as she does not interfere with ethnic affairs.She is truly costly. As western leaders' idol respected and honored, she has been used to provide means of sanctions lifted, donations, businesses for rich people, high class and educated families..if you areaminority andamargin, don't expect anything. fight for yourself!
Daw Suu is Burmese she does everything like her father.And she cannot do anything so she isasnake and she can change her skin any time.
အောင်ဆန်းသမီးဟာသေခါနီးပြီး သမ္မတဖြစ်ချင်သေးတယ် ဒါဟာ မဖြစ်နိုင်တော့ပါ လောလောဆယ် သိန်းစိန်အစိုးရနှင့်အဆင်ပြောနေတာကို ကြည့်ရင် အောင်ဆန်းသမီးဟာ လုံးဝ မရုံးသားဘူးဆိုတာ သေချာတယ်..UNFC နှင့် နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား တွေကို ဦးဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်များ လုံးဝ အားမရပါ.. သိန်းစိန်အစိုးရ ပိုက်ဆံပေးရင် အားလုံး သဘောကျ ကျေနပ်ကြတဲ့ ခေါင်းဆောင်မျိုး တွေပဲ..
Nay Htoo said...
When Daw suu traveled to western countries after her release, she didn't open her mouth regarding the ethnic conflicts. Even if abuses and killings have been committed by the Burmeses army especially in Kachin state at that time, Daw Suu was silent about that. She emphasized on how the progress being made by thein sein gov. and removel of economics sanctions. The whole world believes in Suu Kyi because of her accreditation from Oxford University and her sacrifice in the house arrest to resent for her father.